Medical Writings ဆေးပညာစာများ: Fistula-in-Ano (FIA) ဂရင်ဂျီနာFistula-in-Ano (FIA) ဂရင်ဂျီနာ
Fistula-in-Ano (FIA) ဂရင်ဂျီနာFistula-in-Ano (FIA) ဂရင်ဂျီနာ
Q: I would like to know about the disease called Fistula. Does it need to cure urgently or not? Your urgent reply will be highly appreciated. If you have time please explain in Burmese about Fistula.
Thu, Aug 8, 2013 at 1:43 PM
ကျနော်က အစိုးရ ရုံး ဝန်ထမ်းတစ်ယောက်ပါ။ Fistula-in-Ano (FIA) ဂရင်ဂျီနာ ရောဂါရဲ့ sign က ဘယ်လိုပါလဲခင်ဗျာ။ ကန်တော့ပါဆရာ ကျနော်ရဲ့ စအိုဘေးကနေ အရေပြား ပွန်းသလိုမျိုး ဖြစ်နေပြီး စပ်ဖျင်းဖျင်းဖြစ်နေပါတယ်ဆရာ။ ဖြစ်တာ ၂ ရက်လောက်တော့ရှိနေပါပြီ။ ဝမ်းသွားရင်တော့ စအိုကနာတာတို့ဘာတို့ မရှိဘူးဆရာ။ ဒါပေမယ့် ခုနပြောတဲ့ စပ်ဖျင်းဖျင်း ဖြစ်တဲ့နေရာက ချိုင့်ခွက်လိုဖြစ်နေတယ်။ ကျနော်တာဝန်ကျတဲ့နေရာက မြို့နဲ့ဝေးတယ်။ တကယ်လို့ (FIA) ဂရင်ဂျီနာ ဖြစ်တယ်ဆိုလဲ မခွဲစိတ်ပဲ ဆေးသောက်ဆေးထိုး ကုလို့ရပါသလား။ နောက်ပြီး မြန်မာတိုင်းရင်းဆေးနဲ့ရော ကုလို့ ရပါသလား။ ခွဲရင် ပိုက်ဆံ အများကြီးကုန်တယ်လို့လဲ ကြားဖူးတယ်။
ဂရင်ဂျီနာဆိုတာ ရှေးကတည်းက ရှိခဲ့တယ်။ လူ ၁ သိန်းမှာ ၉ ယောက်နီးပါး ဖြစ်ကြတယ်။ ယောက်ျားက ၂ ဆ ဖြစ်တယ်။ အသက် ၄ဝ နီးနီး (၃၈့၃ နှစ်) မှာ အဖြစ်များဆုံးပါ။ ကလေးတွေမှာလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ ဆေးပညာဖခင်ကြီး ဟပ်ပိုကရေးတီးစ် (ဘီစီ ၄၆ဝ-၃၇ဝ) က ညွှန်းခဲ့ဘူးသလို၊ ပြင်သစ် ဘုရင် လူဝစ်-၁၄ (၁၆၃၈-၁၇၁၅) မှာ ဒီရောဂါ ရှိခဲ့တယ်။
ဝမ်းသွားပေါက် စအိုဘေးမှာ အနာပေါက်ရင် ကြီးကြီး-သေးသေး မပေါ့ပါနဲ့။ မရှက်ပါနဲ့။ ဖိထိုင်တော့ ပြည်- မန်းရည်-ငန်းရည်က ကောင်းကောင်း မထွက်နိုင်ဘူး။ ဒီတော့ အနာက အထဲမှာ လှိုက်စားမယ်။ အထဲဆိုတာ အဆီ၊ အသားတွေ လွန်သွားရင် ဝမ်းတွေကို လှောင်ထားတဲ့ အစာဟောင်းအိမ်အထိ ရောက်ပြီး၊ အထဲပေါက်တခု ဖြစ်လာမယ်။ အဲလို တူးမြောင်းလို ဖြစ်လာတာကို ဗမာလို အမျိုးမျိုးခေါ်နေကြတယ်။ မြန်မာအဘိဓာန်က “ဂရင်ဂျီနာ” ရော “ဘရင်ဂျီနာ” လို့ပါ ရေးပါတယ်။ ဆရာတော် အရှင်သြဘာသာဘိဝံသ စီရင်တဲ့ သုတေသန သရုပ်ပြ အဘိဓာန် မှာ ဘဂန္ဓလာ “ဂယင်ဂျီနာ” လို့ ပုံနှိပ်ထားတယ်။ မြောင်းကနေ ဘေးကို လက်တံတွေ ထွက်နိုင်သေးတယ်။ ကွန်ကရစ်တွေနဲ့ မံထားတဲ့ မြောင်းမျိုး မဟုတ်ဘဲ၊ အနာ နုတ်ခမ်းသားလို မကျက်နိုင်တဲ့ အသားနုတွေသာ ဖြစ်တယ်။ စအိုအနားမှာ အပြင်ပေါက်က တခုမက ရှိသလို အထဲပေါက်ကလည်း များနိုင်တယ်။ များလွန်လွန်းလို့ တချို့ ကရွတ်ခွေနဲ့ ထိုင်ရတယ်။
စအိုဘေးမှာ အနာပေါက်လို့ မဟုတ်ဘဲလဲ ဖြစ်သေးတယ်။ ထိခိုက်ဒဏ်ရာ၊ စအိုကွဲနာ (FIA နောက်တမျိုး)၊ တီဘီ၊ ကင်ဆာ၊ ဓါတ်ကင်တာ၊ Steroid ဆေးပေးတာ၊ Chlamydia ပိုးဝင်တာတွေကနေပါ ဖြစ်တတ်တယ်။ HIV နဲ့လဲ ဆက်နေသေးတယ်။ ဂနိုရီးယား၊ Ulcerative colitis, Diverticulitis, Crohn’s disease တွေကြောင့်လည်း ဖြစ်နိုင်တယ်။
သေခြာကြည်ရင် အပြင်ပေါက်ကိုသာ မျက်စိနဲ့ မြင်ရမယ်။ ပြည်-မန်းရည်ဆိုတာ ထွက်လာလိုက် ပျောက်လိုက်၊ စအိုထဲ လက်ထည့် စမ်းနည်း PR exam လုပ်ရတယ်။ စအိုထိန်း ကြွက်သားဝိုင်းနဲ့ အဆက်အစပ်ကို စစ်ဆေးရမယ်။ Goodsall rule ဆိုတာကို ခွဲစိတ်ဆရာဝန်တိုင်း အားကိုးကြရတယ်။ “အပြင်က ပြွန်ပေါက်ဟာ စအိုပေါက် ရှေ့ပိုင်း တဝက်မှာရှိရင် အထဲ လမ်းဟာ မျဉ်းဖြောင့် စပုတ်တံလို သွားတယ်။” “စအိုပေါက် နောက်ပိုင်း တဝက်မှာရှိရင် မျဉ်းကောက်၊ မြင်းခွါပုံလို သွားမယ်။”
ဆင်တူရိုးမှား တခြား ရောဂါတွေနဲ့ ခွဲခြားရမယ်။ Fissure in ano (FIA) စအိုကွဲနာ၊ Internal piles အတွင်းလိပ်ခေါင်း၊ External piles အပြင်လိပ်ခေါင်း၊ Periproctal abscess ပြည်တည်နာ၊ Anal polyp စအိုအသားပို၊ Sentinel tag အဝစောင့် အသားပို။
အနာ-အနာတွေက ပျောက်သွားလိုက် ပြန်ပေါ်လိုက်။ ပျောက်သွာတာ မဟုတ်ဘဲ မြုံနေတာပါ။ သူ့အလိုလို ပျောက်တယ် ဆိုတာ မရှိပါ။ ဆေးကုပါ။
ကျွန်တော်တို့လို ဆရာဝန်တွေ သင်ကြ-သုံးကြတဲ့ ခွဲစိတ်နည်းတွေထဲမှာ အများဆုံးသုံးနည်းကတော့ Fistulectomy ပြွန်ကို အနာသစ်လုပ်၊ အသားနုကို အခြေကနေ အထက်တက် ကျက်စေတဲ့နည်းပါ။ ပဋိဇီဝဆေး အရင် ပေးရတယ်။ မခွဲခင် တညနဲ့ မနက်ထ ဝမ်းခြူပေး၊ ခါးထုံဆေးနဲ့ ခွဲပါတယ်။ ခွဲပြီးစမှာ ကရိကထတော့ များမယ်။ ၂-၃ ရက် ရာဘာပိုက် တခု ထည့်ထား ပေးပါမယ်။ လေလည်နိုင်အောင်ပေါ့။ အစာကို ရေ-အရည်၊ နောက် ဆန်ပြုတ်-စွပ်ပြုတ်၊ နောက်မှ ထမင်းစားခိုင်းတယ်။ ဝမ်းမဖြစ်အောင် ဆင်ခြင်ခိုင်းတာပါ။ နေ့တိုင်း ဆေးထည့်ပေးမယ်။ ကောင်းသွားပါလိမ့်မယ်။ အခြေခံရောဂါရှိရင်လည်း ကုရပါတယ်။
“မုဆိုး စိုင်သင်” ဆရာဝန်တွေလည်း အကောင်းဆုံး ထင်တာနဲ့ ကုပေး၊ ပိုကောင်းတာတွေ့ရင် ပြင်ကြရပါတယ်။